Apple က iOS 11.1 ကို Emoji အသစ်၊ 3D Touch solution နှင့်အခြားအရာများဖြင့်တရားဝင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် အိုင်ဖုန်းသတင်း
Apple က iOS 11.1 ကို Emoji အသစ်၊ 3D Touch solution နှင့်အခြားအရာများကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
Apple က iOS 11.1 အတွက်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ရုံ မနေ့က iOS 1 ရဲ့ beta 11.2 version ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် သူတို့အတွက် beta တစ်ခုစတင်ရန်တရားဝင် version ကို "ကျော်ဖြတ်" ခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ထူးဆန်းသည်၊ သို့သော်ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ဗားရှင်းအသစ်ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပြီးမနေ့က developer များအတွက်ဖြန့်ချိသော beta သာဖြစ်သည်။
ဤသည်အပါအ ၀ င်၊ အသစ် Emoji ၏ကောင်းတစ်စည်း ကန ဦး beta ဗားရှင်းများ (ဖုတ်ကောင်များ၊ ဒိုင်နိုဆောများ၊ တောင်တက်သမားတစ် ဦး၊ ပဝါ၊ အမျိုးမျိုးသောအသုံးအနှုန်းများနှင့်အခြားအရာများ) တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် 3D Touch ကိုယ်ဟန်အမူအရာပြproblemနာကိုဖြေရှင်းခြင်း iPhone ရဲ့ဘေးဘက်ကိုနှိပ်ပြီး multitasking နဲ့အခြားအရာများပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင်ဗားရှင်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထို့ကြောင့်အနည်းငယ်မျှသာရှိသောတိုးတက်မှုများမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေရန်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ update အသစ်၏ဖော်ပြချက်တွင် emoji အသစ် ၇၀ ကျော်ကိုထူးခြားသောတိုးတက်မှုများအဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဓာတ်ပုံများနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောပြproblemsနာများကိုမှဖြေရှင်းချက် ဓာတ်ပုံ၏အာရုံနှင့်ပြaနာကိုဖြေရှင်းသည့်အနေဖြင့်ဖန်သားပြင်များအကြားတွင် scrolling လုပ်ခြင်း၊ PDF ဖိုင်များသို့ပိုမိုကောင်းမွန်သော VoiceOver ၀ င်ရောက်မှုနှင့်ပြသမှုမရှိသောအခြားသော့များတိုးတက်ခြင်းနှင့်ယခင်ဗားရှင်းရှိပုံမှန် bug fix များနှင့်အမျိုးမျိုးသောပြtroublနာများအထိ - ။
iOS 11.1 ဗားရှင်းအသစ်ကို Setting> General, iPhone, iPad နှင့် iPod Touch တို့တွင်တိုက်ရိုက်တွေ့နိုင်သည်။ iPhone 5S တွင်ဖော်ပြသောအရွယ်အစားမှာ 1,14 GB ဖြစ်သည်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ခဏကြာလျှင်စိတ်ရှည်ပါ။ မွမ်းမံ!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » Apple က iOS 11.1 ကို Emoji အသစ်၊ 3D Touch solution နှင့်အခြားအရာများကိုတရားဝင်ကြေငြာခဲ့သည်
14 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
iPhone 11 နဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ iOS7ကိုအဆင့်မြှင့်လိုက်တယ်။ Lag နဲ့ reboot တွေကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်။ ငါ "force" တောင်းခံလိုက်ရင်တစ်နေ့မှာအကြိမ်များစွာပြိုလဲသွားတယ်။
ငါပြန် 10.3.3 ထံသို့သွားလေ၏
ဤပြproblemsနာများကို iOS 11.1 ဖြင့်ဖြေရှင်းပါသလား။ ငါမွမ်းမံရန်ကိုကြောက်သည်။ မှားသွားပြီးပြန်မသွားနိုင်တော့ပါ။ 🙁
တကယ်လို့မင်းမှာ 5s ဒါမှမဟုတ်6ရှိရင် iOS 10 မှာပဲနေသင့်တယ်။7ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် iOS 11.1 တင်ပြခဲ့တဲ့ပြmanyနာများစွာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပုံရတဲ့ဗားရှင်း ၁၁.၁ မှာယုတ္တိရှိဖို့လိုတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးမွမ်းမံသင့်တယ်။
Alejandro Castellanos ဟုသူကပြောသည်
ငါ beta5ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးကတည်းကငါဘက်ထရီပြproblemsနာအားလုံးဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ မွမ်းမံ! နောက်ဆုံးတော့ဘက်ထရီအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိတယ်
Alejandro Castellanos ကိုပြန်ပြောပါ
Alejandro Castellanos ပြောသည့်အတိုင်းဗုံများသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
5s မှာတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ ယုတ္တိရှိသည်မှာတစ်ခါတစ်ရံတွင်အချို့သောနှောင့်နှေးမှုများရှိသော်လည်း၎င်းသည် iPhone ဟောင်းဖြစ်သည်! လေးစားပါတယ်
ကောင်းပြီ၊ Jordi မှာခင်ဗျားလိုပဲအမြင်ရှိခဲ့တယ်။ ios5ကနေ ios 7.0.2 ကိုသွားတဲ့အခါကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့ 11.0.2s အလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးအံ့အားသင့်မိပါတယ်။ iOS7မှာ iTunes ကနေတစ်ဆင့် update လုပ်တယ်။ ဤ ၁၁.၁ တွင်လူအများကရုန်းရင်းခတ်နေကြသည်ကိုကျွန်ုပ် (အခြား iOS ထုတ်ကုန်များနှင့်မရေမတွက်နိုင်အောင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့သကဲ့သို့) ၎င်းသည်အသေးစား update အဖြစ် OTA မှတစ်ဆင့် update လုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမိနစ် ၃၀ နီးပါးရှာဖွေတွေ့ရှိရန် ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်း၏ကာတွန်းသည်သင်သော့ဖွင့်တိုင်းတိုင်းလဲလဲထိ မိ၍ လဲနိုင်သည်ကိုမနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ ကျန်ဖုန်းများက ၁၁.၀.၂ နှင့်ဆင်တူသည်ဟုဆိုကြသော်လည်းကီးဘုတ်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ အိုင်ဖုန်းရှေ့တွင်တွားသွားသည်ဟူသောခံစားချက်သည်အရင်းအနှီးဖြစ်သည်၊ စနစ်သည်အချိန်တိုင်းနောက်ပြန်ကျသွားသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ iOs သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်ဇနီးသည် 5s ဖြင့်ကျန်ခဲ့သည့်အချိန်အနည်းငယ် (X ရောက်သည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်၏ 6S ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်) ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုချန်ထားမည်ဟုထင်ပါသည်၊ သို့သော်ဤ update ဖြင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံကိုအရင်ကထက်အများကြီးနိမ့်ကျစေပါသည် iOS 11 ၏အကောင်းဆုံးထင်မြင်ချက်ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ။
ငါ 6s ရှိသည်နှင့်ဗုံအရူးဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်အိမ်မှ ၈:၃၀ တွင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီး ၆၅% / ၅၅% ဖြင့်အိမ်ပြန်ရောက်သည်။
14.30:90 pm တွင်အိမ်သို့ကျွန်ုပ်မပြောခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် 85% -XNUMX% နှင့်အတူမရောက်ရှိမှီ
Gustavo Rodriguez ဟုသူကပြောသည်
ငါ့မှာ Iphone5S ရှိတယ်ဒါပေမယ့် ၂၅၆ Mb အလေးချိန်ရှိသလား။ တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီ???
gustavo rodriguez အားပြန်ပြောပါ
ငါ OTA မှတဆင့် update နှင့်အတူမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံရှိခဲ့ကတည်းကငါငါ့အတှေ့အကွုံပေးသင့်ကိုအကြံပြု, iTunes ကိုတဆင့်တတ်နိုင်သလောက်မွမ်းမံရန်ဖြစ်ပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မွမ်းမံရုံသာရှိပါသေးတယ်၊ ကျွန်ုပ်သာယာဝပြောရေးအတွက်သူတို့ဖြေရှင်းရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာ၊ သူတို့ကမဖြေရှင်းနိုင်သေးတာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအချိန်သတ်မှတ်ထားပြီးဖုန်းကိုပိတ်ထားသည့်အခါ၊ , etc etc .... သင်ဖွင့်လိုက်သောအခါနာရီသည်အလိုအလျောက်ညှိနှိုင်းမှုပြုလုပ်ပြီးအချိန်ကိုသူ့ဟာသူပြောင်းလိုက်ပြီဆိုလျှင်မိုက်မဲဟန်ရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုနှောင့်ယှက်စေသည်။ ပျော်ရွှင်သောသူတို့အားနှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ iPhone7ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး၊ ဘက်ထရီသိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်၊ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်၏ iPad Air2တွင်အတွေ့အကြုံမကောင်းခဲ့ပါ။ iOS 11 မှာ Keyboard မှာနောက်ကျကျန်ခဲ့တာကြောင့် iOS 11.1 နဲ့ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကငါ့ကိုနောက်ထပ်ပြaccelerနာတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့တယ်။ Accelerometer ပြိုကွဲသွားပုံရတယ်။ Asphalt8 ကိုကစားတဲ့အခါဘာကြောင့်လဲ။ ကစားရန်မဖြစ်နိုင်သည့်အချိန်အထိကားသည်လက်ဝဲဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းမှီသည်။ ငါကအက်ပလီကေးရှင်းလို့ထင်ပေမယ့်တခြားသူတွေကိုငါစမ်းကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒီဟာက iPad ပေါ်ကတစ်ယောက်ယောက်နဲ့လား။
iPhone X ၏ Face ID သည် Twins Test ကိုအောင်နိုင်မလား။ ဒီမှာကျွန်တော်တို့တကယ့်ဗွီဒီယိုကိုချန်ထားခဲ့တယ်
Google Pixel2XL တွင်ပြmodeနာများဆက်လက်ရှိနေသေးသည်။ ပုံတူစနစ်နှင့်ရှုပ်ထွေးသောအသံဖမ်းခြင်းပြတ်တောက်ခြင်း